မိုးရာသီရဲ့အခါးသီးဆုံး အိပ်ချင်မူးတူးစိတ်ကို ဒီအစားအစာလေးတွေစားပြီး တွန်းလှန်ကြမယ် – FoodiesNavi
မိုးရာသီရဲ့အခါးသီးဆုံး အိပ်ချင်မူးတူးစိတ်ကို ဒီအစားအစာလေးတွေစားပြီး တွန်းလှန်ကြမယ်
By yin sandi On July 12, 2018 0
မိုးအေးအေးလေးလေးမှာ အိပ်ယာထဲခွေပြီးဇိမ်ခက်နေချင်ပေမယ့် မဖြစ်မနေရုံးသွားဖို့အိပ်ယာထရတဲ့ဘဝကြီးက တော်တော်ကြီးခါးလွန်းလှတယ် ? အိပ်ချင်မူးတူးငိုက်မျဉ်းရင်း ရုံးချိန်အမီဒိုးရတဲ့ မင်မင်နဲ့ဘဝတူဘော်ဒါတွေအတွက် အစားအစာလေးနဲ့အစားထိုးဖြေသိမ့်လို့ရအောင် ? ဒီလိုရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အစားအသောက်လေးတွေကို လက်တို့ပေးမယ်နော် ?? ညွှန်းပေးမယ့်အစားအသောက်တွေကလည်း ရာသီပေါ်အစားအစာလေးတွေမို့ သိပ်အထွေအထူးလိုက်ရှာနေစရာမလိုဘူးနော် ?
မနက်ခင်းစာကိုတော့ သိပ်အီအီနောက်နောက်ကြီးမဖြစ်မယ့် ပြည့်ပြည့်ဝဝအစားအစာတွေကိုရှောင်သင့်တယ်။ အရမ်းဗိုက်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုစားထားမယ်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့ကျပြီး ပိုပြီးငိုက်မျဉ်းလာတတ်တယ်။ အာ့တော့အိပ်ရေးမဝတဲ့ရက်တွေဆို ဆီကြော်တွေ ၊ ကောက်ညှင်းမုန့်တွေရှောင်တာပိုကောင်းတယ်။ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ ပေါင်မုန့် ၊ ပဲပြုတ်နံပြား ၊ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ကြာဇံဟင်းခါး ၊ ကိတ် စတာတွေစားပေးသင့်တယ်။ ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ လီမွန်တီးပူပူလေးဖြစ်ဖြစ် ၊ ပန်းသီးဖျော်ရည် ၊ လိမ္မော်ရည်လေးတွေတွဲဖက်ပေးရင် စိတ်ပိုပြီးကြည်လင်စေတယ်။
နေ့လည်စာကိုတော့ စိတ်ကြိုက်အစားအစာတွေကို အဝစားပေးလို့ရတယ်။ ချဉ်ဟင်းတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၊ ချဉ်ပေါင်ကြော် ၊ ကင်မွန်းချဉ်ရွက်ကြော် ၊ မန်ကျည်းရွက်သုပ်စတဲ့ ဗီတာမင်စီဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အရံဟင်းလေးတော့တွဲစားဖို့လိုတယ်။ ထမင်းစားပြီး(၅)မိနစ်လောက်ရင် နာနတ်သီး ၊ ပန်းသီး ၊ ပန်းသစ်တော်သီး ၊ လိမ္မော်သီး ၊ သစ်တော်သီး ၊ ကီဝီသီး ၊ Sunkist သီးစတဲ့ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့သစ်သီးလေးတွေစားပေးမယ်ဆိုရင် အလုပ်ပြန်လုပ်ရတဲ့အချိန် ထမင်းလုံးစီတဲ့ဝေဒနာကို ကွင်းလုံးကျွတ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ညဘက်ကတော့ အရွက်သုပ်လေးတွေများများစားပေးသင့်ပေမယ့် တစ်နေ့တာလုံးရဲ့အနားယူတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ အစားအစာတွေသိပ်ရှောင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်။ အဓိကနိုးကြားတက်ကြွနေရတဲ့အချိန်တွေအတွက်ပဲ အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားပေးမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းမှုတိုင်းက သွက်လက်တက်ကြွပြီး အထာကျနေမှာအသေအချာပါပဲနော်။
ရှယ်ဂေါ်တဲ့အရသာနဲ့ လျှာကိုဂျွမ်းပြန်လန်သွားစေမယ့် Spicy Food ကောင်းကောင်းလေးစားချင်ရင်တော့..
Birthday ကိတ်ပုံစံ ဆူရှီအကိတ်ကြီးတွေမှာပြီး ရိုလို့ရပြီနော် ?